Afganistana: Resabe Nateraky Ny Lahatsarim-Pamonoana Noho Ny Fijangajangana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2012 1:57 GMT
Tany ampiandohan'ny Jolay dia vehivavy Afgana iray no novonoina imasom-bahoaka tao aminà tanàna kely any amin'ny faritanin'i Parwan, làlana tokony ho ora iray miala an'i Kabul renivohitra. Nolazaina fa novonoina ilay vehivavy 22 taona taorian'ny filazan'ny lehilahy Taliban roa manana ny maha-izy azy ao an-toerana fa hoe samy nanana fifandraisana tamin-dravehivavy ry zareo ary niampanga azy ho nampirafy. Lahatsary iray nalain'olon-tsotra [tandremo: sary maherisetra] tamin'ilay famonoana, azon'ny Reuters, no mampiseho lehilahy lehibe iray mitafy “turban” mitanisa ny andininy avy ao amin'ny Korany sady manambara hoe : “Tsy afaka hamela azy izahay, Andriamanitra no miteny aminay hamarana ny aminy. Juma Khan, vadin-dravehivavy, no manan-jo hanapitra ny ainy.” Avy eo dia notifirana ho faty, tena akaiky kely ilay vehivavy mitafy “burqa”, raha ireo lehilahy 150 be volombava nanatrika ilay famonoana kosa nitehaka ny fahafatesany sy nihaka hoe “Lehibe Andriamanitra,” “Ho Ela velona ny mujahideen” [fomba fiantsoan-dry zareo Taliban ny tenany ]
Nanakiana ny Taliban noho ilay famonoana ireo manampahefana Afgana. Fony teo amin'ny fitondrana ny ‘fondamentalistes’ teo anelanelan'ny 1996-2001, dia zava-nahazatra teo amin'ny firenena ny famonoana imasom-bahoaka noho ny fijangajangana. Ny Taliban, na izany aza, dia nandà ny mahavoarohirohy azy tamin'ilay famonoana.
Niteraka fampiakaram-peo nanerana ny tany ny famonoana ilay vehivavy. Any Afganistana, ny Filoha Hamid Karzai dia nanameloka ilay famonoana ho mifanohitra amin'ny “maha-Islamika sy ny maha-olona,” ary nanome baiko ny polisy mba hitady ireo meloka sy hitondra azy ireny eny amin'ny fitsaràna. Fawzia Koofi, vehivavy iray parlemantera Afgana, taorian'ny nijereny ilay lahatsary dia niteny hoe:
Frogh Wazhma, Afgana manampahaizana momba ny fahasamihafàn'ny lahy sy vavy ary mafàna fo mpiaro zon'olombelona dia nibitsika [fa] tamin'ny 9 Jolay hoe :
Any ivelan'i Afganistana, nahatezitra olona maro ilay lahatsary. Laurent Joncas, Kanadiana, nanoratra tao anatinà taratasy iray ho an'ny National Post tamin'ny 10 Jolay hoe:
Ny 11 Jolay, nitarika vehivavy Afgana sy lehilahy am-polony maro hidina an-dalambe ihany koa ilay lahatsarin'ny famonoana. Ho fanamelohana ilay famonoana sy nitakiana tamin'ny governemanta mba hihetsika bebe kokoa hiaro ny zon'ny vehivavy eo amin'ny firenena, ireo mpanao hetsi-panoherana dia niventy koa ny hoe “Vonoy ireo lehilahy namono ny rahavavy/anabavinay!”
Ilay hetsi-panoherana dia notarihan'i Mumtaz Bibi, vehivavy Afgana 16 taona izay sisam-paty tamin'ny fanondrahana asidra azy. Namindra teo anilan'i Sahar Gul izy, tovovavy 15 taona izay niteraka hatezerana eran-tany ny nanjo azy taorian'ny namonjena azy avy eny an-tànan'ny vadiny sy ny havany izay tsy nanome hanina sy nampijaly azy mba hanerena azy hivaro-tena. Sima Samar, iray tamin'ireo nahazo ny loka Nobel momba ny Fandriampahalemana ary mpitarika ny Kaomisiona mahaleotena Afghan miaro ny Zon'olombelona, dia nanatevin-daharana ihany koa ilay hetsi-panoherana tao Kaboul.
Ny olona sasany nanararaotra ilay famonoana ho fotoana iray hitsikeràna ny firenena Tandrefana amin'ny tsy fahafahan-dry zareo mamaha ny olana marobe ao Afganistana na dia efa hatramin'ny 2001 aza no nirotsahany tao amin'ny firenena. Ny iraky ny Euronews,Mustafa Bag, nibitsika tamin'ny 12 Jolay hoe :